ပြောရအုံးမယ် အလင်းဆက်ရေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပြောရအုံးမယ် အလင်းဆက်ရေ
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Nov 7, 2013 in Creative Writing | 58 comments
ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ ဒညင်းဝက် အဲလေ အလင်းဆက်ရေ လို့ပဲအစချီတော့မအေ။ အစချီဆိုညီးက အစဆွဲထုပ်တာကိုး။ ထွက်နေတဲ့ဒေါသညီးဆီရောက်သပေါ့အေ။
ကျုပ်တို့နိုင်ငံမယ် မီးခိုးမထွက်တဲ့စက်ရုံဆိုပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုတင်စားခဲ့တယ်အေ့။ အခုလိုပြောင်းလဲ လာတဲ့နိုင်ငံရေးခြေအနေ၊ ဖြေလျှော့လာတဲ့စည်းကမ်းတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာခရီးသွားတွေအ၀င်များလာ တာဝမ်းသာစရာပေါ့ အလင်းဆက်ရယ်။
ဒါပေမဲ့လဲအေ လူ့စည်းဘီလူးစည်းဆိုတာတော့ရှိရမယ်မဟုတ်လား။ ဖြူဖြူမြင်တိုင်းကိုးကွယ်နေရတာ တော့ဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်အေ။
ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ ဒညင်းဝက်ရယ်။ ရင်နဲ့မဆံ့လို့ပါ။
နိုင်ငံတကာခရီးသည်တွေအပေါ်ကို အိမ်ရှင်က ဧည့်ဝတ်မကျေရဘူးမပြောဘာဘူးအေ။ ဧည့်ဝတ်ကျေရ မပေါ့။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံလာပေးတဲ့သူပဲဟာ။ မြန်မာဆိုတာကလဲ အစကတဲက ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှု့ကို ဂုဏ်တရပ် အနေနဲ့ထိမ်းသိမ်းခဲ့တာပါအေ။ ဒါပေမဲ့ အလင်းဆက်ရေ ပြောချင်တာကတော့
ဧည့်ဝတ်ကျေတာနဲ့ ဘုရင်ခံလိုကြိုဆိုရတာတူသလားအေ။ Tour Company တွေနဲ့ Tour Guide တွေကတော့ သူ့တို့ Customer တွေကို ဧည့်ဝတ်အစွမ်းကုန်ကျေတာတော့မဆန်းပေမဲ့ သူတို့ ဧည့်ဝတ် ကျေဖို့ကို ငါတို့လို သာမာန်ပြည်သူတွေကပါ လိုက်ဧည့်ဝတ်ကျေနေရတာတော့ အင်းတကယ်တမ်းပြော ရရင် သူတို့ဧည့်ဝတ်ကျေဖို့ ငါတို့ပြည်သူတွေ ဒုက္ခလိုက်ခံနေရတာတော့ ဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်နော် အလင်းဆက်ရေ။
မြင်နေရတာတွေတော်တော်ကိုမျက်စိစပင်မွှေးဆူးနေတာတွေများလာတော့ ပြောစရာတွေဖြစ်ကုန် တာပေါ့အေ။
နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေလာတာကို ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတဲ့သူကိုယ်တိုင် အိုးစည်ဗုံမောင်းနဲ့ဆင်းကြိုတာ တဆိတ်လွန်သလားလို့ပါ။ ထားပါ ဒါကကြုံလို့ပြောဒါဘာအေ။ သူတို့ကိစ္စပါ။
ငါတို့နိုင်ငံဟာ စည်းကမ်းမရှိဆုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံဆိုတာလူတိုင်းသိနေသမို့ထူးမပြောတော့ပါဘူးအေ။ အထူးသဖြင့်ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းပေါ့အေ။ ဒီလိုစည်းကမ်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာ ဒီ Tour Company တွေစည်းကမ်းမရှိတာတော့ မပြောလိုတော့ပါဘူးအေ။ ဒါပေမဲ့ ငါတို့က နိုင်ငံခြားသားတွေ နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာ ဘယ်သူ့မှ သောက်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီးမျက်နှာပြောင်တိုက်တာတော့ တဆိတ်လွန် သလားလို့ပါ အလင်းဆက်ရယ်။
ပထမ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားကိုပြောမယ်အေ။ Tour ကားတွေလာရင် သူတို့ ဧည့်သည်တွေလမ်းလျှောက် ရမှာစိုးလို့ ခြေထောက်ပေမှာစိုးလို့ဆိုပြီး ကားကို ဘုရားလှေကားရင်းထိရအောင်ကပ်တယ်အေ။ ကားကရှည်ပြီးကြီးတော့ အမြဲ ဖင်ကြီးထွက်ပြီး ငါတို့မှာ ခြေဗလာနဲ့ အဲကားကြီးကိုရှောင်ကွင်းသွားရ တယ်အေ။ ကြိုရင်လဲထိုနည်းလည်းကောင်းပဲအေ့။ ဧည့်သည်တွေကို ငါတို့ပြည်သူတွေနည်းတူ လမ်းလျှောက်ခိုင်းလို့မရဘူးလားလို့ ငါစဉ်းစားမိတယ် အလင်းဆက်ရယ်။
ကားကိုငါတို့ထိုးသလိုကျကျနနပါကင်ထိုး၊ ဧည့်သည်တွေကို ဖိနပ်စီးလမ်းလျှောက်ခိုင်း၊ ဘုရားခြေရင်း ရောက်မှ သူတို့ ဧည့်သည်တွေဖိနပ်တာဝန်ယူလို့မရဘူးလားအေ အလင်းဆက်ရယ်။ လမ်းလျှောက်ခိုင်းရင် အဲဒီ ဧည့်သည်တွေစိတ်ဆိုးမှာလား နောက်ကိုမလားတော့မှာလား ငါသိချင်လို့ပါအလင်းဆက်ရေ။
ငါတို့နိုင်ငံတကာကို အဲလိုသွားရင်ကော အဲလိုပဲဖူးဖူးမှုတ်ခံရသလား စည်းကမ်းဖောက်ချင်တိုင်းဖောက် လို့ရလား သိချင်လို့ပါ အလင်းဆက်ရယ်။
အဆိုးဆုံးတခုပြောမယ်အေ။ အဲဒါကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရှေ့မှာပေါ့အေ။ လူတကာသိလောက်ပါတယ်။ သူတို့ဘယ်လောက်လူပါးဝသလဲဆိုတာ။ ကားကို ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရှေ့တည့်တည့် အများပြည်သူကားမောင်း နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာရပ်ပြီး သူတို့ ကားတစ်စီးလုံးပေါ်မှာပါသမျှ လူအားလုံးကို စိမ်ပြေနပြေချတယ်အေ။ ငါတို့ကသူတို့ဆင်းမပြီးမချင်းရပ်စောင့်ရတယ်အေ။ အားလုံးဆင်းပြီးတော့ အဲဒီကားကထွက်သွားပြီး တနေရာမှာပါကင်ထိုး ဂိုက်ကပြန်လာဆိုပြီးခေါ်မှလာကြို မဟုတ်ဘူး အလင်းဆက်ရေ။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရှေ့ လမ်းတခြမ်းကိုခပ်တည်တည်ပဲ ပါကင်ထိုးသတော့။ သူပါကင်ထိုးမပြီးမချင်း ငါတို့ကရပ်စောင့်ရပြန်ရော။ တကယ်ဆို အဲတိုးကားတွေကို ကားပါကင်ဝင်းမှာထိုးပြီး ဒီဧည့်သည်တွေကိုလမ်းလျှောက်ခိုင်းရင် တော်တော်ရက်စက်ရာများကျမှာစိုးလို့လား အလင်းဆက်ရယ်။ ဖြေကြည့်ပါအုံးအေ။
မနေ့ကဆိုရင် အဲလိုတိုးကား သုံးစီးတိတိအဲလိုလုပ်တဲ့အတွက် ငါ့မှာ လသာ ၁ ကျောင်းရှေ့ကနေ ဇော်ဂျီ ကဖီးရှေ့ရောက်ဖို့ နာရီဝက်ကြာခဲ့တယ်အေ။ အဲဒီလုပ်ရပ်ကို ငါစိတ်တိုသင့်သလား ဒါမှမဟုတ် ငါတို့ရဲ့ မီးခိုးမထွက်တဲ့ စက်ရုံကြီးမို့ အလံလေးတွေဝှေ့ပြီးထောက်ခံသင့်သလား၊ ငါတို့ပါလိုက်ပြီး ဒုက္ခလိုက်ခံရမှာလား စဉ်းစားကြည့်ပါအုံးအလင်း ဆက်ရယ်။
ဒီနိုင်ငံကိုလာလည်ရင် ဒီနိုင်ငံကလူတွေလိုလုပ်သင့်တယ်မဟုတ်လား။ ဘုရင်ခံလို အခွင့်ထူးခံလူတန်း စားဖြစ်နေတာကို ငါတို့ကဘယ်လောက်ထိများ နားလည်ပေးရမလဲ အလင်းဆက်ရယ်။
အရင်တုန်းက ခရီးသည်တင်ကားကြီးတွေရဲ့နောက်မှာ သတိ ကပ်မလိုက်နဲ့ တို့ နမ်းမိသွားရင် တာဝန်မယူတို့ ငါ့ကိုချစ်ရင် မနမ်းပါနဲ့တို့ ရေးထားတော့ နောက်ကလိုက်တဲ့ကားလည်း ကပ်မလိုက်ရမှန်း သတိရတာပေါ့ အခုအဲလိုတွေမရေးကြတာရယ် တစ်စီးနဲ့တစ်စီးကြား အခြားဖက်ကကားဖြတ်ဝန်မှာစိုးသမို့ ရှေ့ကားနောက်မြှီးကို ထိမိလောက်ထိ ကပ်ပြီးမောင်းကြတော့လည်း ရှေ့ကကားလည်းရပ်လိုက်ရော ကိုယ်ကားလည်းခေါင်းထွက် မရ နောက်ဆုတ်မရနဲ့ ငုတ်တုတ်မေ့ဖြစ်ကြတာကို ရန်ကုန်ရောက်တုန်းက သတိပြုမိတယ်ဗျ။
ဒါကြောင့် သတိ ကပ်မလိုက်ပါနဲ့………… လို့။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေးခိုင်မာမှုနဲ့ဆိုင်မယ်ထင်တယ် ခရီးသွားနိုင်ငံခြားတွေကို ဦးစားပေးသလို လုပ်နေကြတာ သူတို့ဆီကငွေကြေးက ခိုင်မာတော့ ရလာတဲ့ပမာဏ က မြန်မာငွေနဲ့တန်ဖိုး သင့်လိုက်ရင် အတော်လေးကိုရတာကိုး အဲဒီတော့လည်း မျက်နှာကြီးရာဟင်း ဖတ်ပါ ဆိုစကားလိုပေါ့ဗျာ။။ သူတို့နိုင်ငံကို ကိုယ်သွားတော့ ကိုယ်ငွေကြေးပေး လို့ရဖို့နေနေ ငွေလဲ စင်တာမှာတောင်လဲပေးပုံမပေါ်လေတော့လည်း ဒီလိုဘဲမျက်နှာငယ်ရပေအုံးမပေါ့လေ။
နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေကို ဦးစားမပေးနဲ့တော့ မပြောပါဘူးကိုခင်ခရယ်။ ဦးစားပေးရမှာပေါ့။ ကိုယ့်နိုင်ငံလာ တဲ့ ဧည့်သည်ပဲဟာကို။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မဖြစ်စေချင်တာက ကျွန်မတို့ရဲ့ အချိန်တွေကကော ငွေတွေမဟုတ်ဘူး လားဆိုတာလေးရယ်၊ သူတို့ဧည့်သည်တွေကိုဧည့်ဝတ်ကျေတာလဲ ဘယ်သူမှမထိခိုက်ပဲ တန်းစေ့ လမ်းစေ့လေးဖြစ်စေချင်တာရယ်လေးပါ။ မနေ့ကဆိုရင် ကျွန်မ တိုင်ပင်တွေအကုန်လွဲကုန်တာ သူတို့မသိ လိုက်သလို တခြားနစ်နာသူတွေလဲရှိနေနိုင်တာပဲဆိုတာလေး ခရီးသွား ကုန်ပဏီ တာဝန်ရှိသူ လူကြီးမင်းများသိစေချင်တာလေးပါ။ ပိုက်ဆံဆိုတာ သူတို့ချည်းရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးလဲ သိစေချင်လို့ပါ။
မသဲရေ နိုင်ငံက စနစ်မှ မကောင်းတာလေ။ ကျွန်တော်တလောက နိုင်ငံတစ်ခုကိုအလည်သွား တုန်းက သူတို့ဆီမှာ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေပို့တဲ့ကားက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကားရပ်နေရာမှာဘဲ ခရီးသွားတွေကိုချပေးပြီး အဲဒီကားကလည်း ကားပါကင်ကို ဆက်မောင်းကာသွားရပ်တယ်လေ။ ခရီးသွားတွေကို လမ်းညွှန်တဲ့ဂိုက်က လမ်းကူးပြီး လိုချင်တဲ့နေရာခေါ်သွားကြတယ်။ ကားတိုင်း အဲလိုပါဘဲ၊ ဒါဘာကိုပြတာလည်းဆိုတော့ အစိုးရရဲ့စနစ်ကလည်း ကောင်းသလို တိုင်းပြည်နေသူတွေ ကလည်း ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်သိ အသိစိတ်နဲ့လိုက်နာကြလို့ပါဘဲ။ VIP ကားတွေ ဘယ်သူ့နဲ့သိတဲ့ ဘယ်လူရဲ့ကားတွေ အဲဒီမှာလာမပြောနဲ့ အဲဒီမှာတာဝန်ကျတဲ့ ရဲက မရဘူး ခရီးသည်ကားပေါ်ကကုန်ရင် ၀ီစီမှုတ်နေတာဘဲဗျ။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုကွာခြားတာတော့ရှိတယ် အဲဒီက စခန်းမှုးအဆင့်ရဲဝန်ထမ်း၏ လစာက တစ်လကို မြန်မာငွေနဲ့ ၁၀ သိန်းကျော်လောက်ရပါသတဲ့ အဲဒီတော့လည်း လာဒ်စားစရာမလို ခယစရာမလိုဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာ။ ဒီမှာတော့ ငါ့ဝမ်းပူဆာ မနေတာတော့လည်း ပေါက်ပင်ဘာကြောင့် ကိုင်းဆိုတာတွေ ဖြစ်နေအုံးမပေါ့လေ။
အပေါ်က အမြင်မတူအတွေးနဲ့ မန်မိတာပါ မသဲပြောတာ Like ပါနော်။
ရတယ်ကိုခင်ခရေ အမြင်မတူတာလဲကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီဂေဇက်ရဲ့ထရိတ်မတ်ဖြစ်တဲ့ အမြင်တူငြင်းခုန်တာတွေကို ကျွန်မသဘောကျတယ်ကိုခင်ခရေ။
ခရီးသွားနိုင်ငံခြားတွေကို ဦးစားပေးသလို လုပ်နေကြတာ သူတို့ဆီကငွေကြေးက ခိုင်မာတော့ ရလာတဲ့ပမာဏ က မြန်မာငွေနဲ့တန်ဖိုး သင့်လိုက်ရင် အတော်လေးကိုရတာကိုး…ဦးခရယ်…ပြောမှပြောတတ်ပလေတယ်…ထင်သလောက်လဲမမြတ်ပါဘူးဂျာ ။ ကယ်ပြောတာ ။ ငွေစာရင်းက တစ်လတစ်လ ရီပို့တက်လာရင် ..ရင်ဆို့ဆို့သွားတယ်…။ ဟိုတယ်တွေသမတာနဲ့ အခန်းဌားခ ၀န်ထမ်းစရိတ် မငီးးးးးးးးးး…. ticketing ဌာန သာမကယ်ရင် ဆန်ပြုတ်မဟုတ်ဘူး ..ရေသောက်နေရပြီ ။
မမခိုင်ဇာတို့ကို ကျနော်တိုင်တည်ပြီးရေးခဲ့တုန်းက ဘယ်လို ခံစားရလဲဆိုတာ အခုမှ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပြီ။
အန်တီသဲ ပြောသွားတာတွေနဲ့ ထပ်တူနီးပါး
အခွင့်ထူးခံထိုက်စေတဲ့ အိုဗာလုပ်ရပ်တွေကို အမြင်မကြည် ဖြစ်မိပါကြောင်း
လိုတာထက်ပိုနေတဲ့ ကိစ္စတွေကို မဖြစ်စေလိုတော့ပါကြောင်း
ကျွန်တော်တို့ သးတို့ နိုင်ငံတွေကိုသွားရင်
အခုကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ဆက်ဆံသလို တန်ပြန်ဆက်ဆံမလား စဉ်းစားသင့်ပါကြောင်းး
သူတို့ အပေါ် ဆိုးလည်းမဆိုးသော
ပထမတော့ ကွကိုယ်ရေးမလို့ပါအေ။ ညီးကအစဆွဲထုပ်လိုက်တော့ အကြံရသွားတာပေါ့။ မဟုတ်ရင် ဘယ်သူ့ တိုင်တည်ပြောရမှန်းမသိလို့ပါအေ။ ငါ့မှာမနေ့ကလွဲသွားတဲ့ ကိတ်စတွေ ဒီနေ့ဆက်မလုပ်နိုင်သေး တော့ တော်တော်ဒေါသထွက်ရတယ်အေ။ နောက်နေ့ နောက်နေ့တွေရွှေ့သွား ရ ရော။ ဒါလေးတွေ ဒါလေးတွေသိစေချင်တယ်အေ။
ကားရပ်ပြီး ဧည့်သည့်တင်/ချ လုပ်တာ
ဂေါပကလူကြီးတွေကိုပြောပြီး English လိုရေးခိုင်းလိုက်ပါမယ်။
Tour ကားတွေရပ်ဖို့ ဂုံးကျော်တံတားမရောက်ခင်မှာ
ခက်တာက ရဲကိုကိုတွေက အဲဒီနေရာမှာ Tour ကားမဟုတ်ပဲ
Tour ကားတွေ သတ်မှတ်နေရာမှာ မရပ်ရင်တော့ အရေးယူပါဘူး။
(လဒ်ပေးလာဒ်ယူ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က သူနဲ့မဆိုင်ဘူး၊
လဒ်ပေးတာရော လဒ်ယူတာရော သူမပါဘူးတဲ့)
အင်း မျက်နှာကြီးရာဟင်းဖတ်ပါတာလား ဖြူဖြူမြင်လို့လားတော့မသိတော့ပါဘူးရှင်။ တခါနှစ်ခါမဟုတ်ကြုံ ကြုံနေရတော့ စိတ်ထဲမှာ တယ်ဘ၀င်တော့မကျတော့ဘူးပေါ့ရှင်။ ဘုရားသွားပြီး စိတ်တိုပြန်လာရတော့ မကောင်းတော့ဘူးပေ့ါရှင်။
တီသဲ.အလွန်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအရင်ပြောလိုပါတယ်. ။ကားကိုဝင်ပေါက်ထိရပ်ခိုင်းတာမျိုး ဘယ်ကုန်ပဏီကမှ မညွှန်ကြားပါဘူး ။ . ဒီကိစ္စမျိုးက အခြေခံကျင့်ဝတ်ကိုနားလည်ရမည့် တိုးဂိုက်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ထင်မိပါတယ်.. ။
တိုးအော်ပရေတာတွေ ၊ တိုးက မန်နေဂျာတွေက
လက်တွေ့ခရီးစဉ်တွေမှာ လိုက်ပါလေ့မရှိကြပါဘူး ..လိုက်ခဲ့ရင်တောင် သူတို့အနေနဲ့ ဒီလိုအချက်ကို ထည့်စဉ်းစားမိမယ်မထင် ။
တကယ့် တိုးအကြီးတွေ( ဧည့်သည်ရာကျော် )မှ အော်ပရေးရှင်း
မန်နေဂျာအဆင့်တွေ Tour Leader အနေနဲ့ လိုက်တတ်တာမျိုးပါ ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်…ကျွန်တော်လို GM အဆင့် ၀န်ထမ်းအနေနဲ့တောင် …အဲ့အချက်ကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားမိတာ ..ခပ်ရှက်ရှက်နဲ့ ၀န်ခံပါရစေ ။
ငါတို့က နိုင်ငံခြားသားတွေ နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာ ဘယ်သူ့မှ သောက်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီးမျက်နှာပြောင်တိုက်တာတော့ လက်တဆုပ်စာ ကုန်ပဏီတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ။ ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကတော့ တိုးကုန်ပဏီဆိုတာ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ သံတမန်ပါပဲ ။
ငါလဲ တိုးဂိုက်လိုင်စင်ရထားသူပါအေ။ ( အခုမှသက်တမ်းမတိုးတော့လို့ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး ) တိုးဂိုက်တွေကတော့ စွတ်လုပ်မှာပဲအေ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ဧည့်သည်ကျေနပ် မှ ဘောက်ဆူးရမှာဖြစ်သလို နောက်တိုးအဖွဲ့တွေကလဲ By name နဲ့လာမှ ကုန်ပဏီမှာ နာမည်ရမယ်။ ဧည့်နည်းနေချိန်မှာတော့ ကုန်ပဏီက ဧည့်ချပေးမှာမို့ သူကတော့ ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ လုပ်မှာပဲအေ့။ ရုံးတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်စည်းကမ်းလေးတွေ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက် တာ လေးတွေကိုသေချာပြောထားပြီး ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ဧည့်သည်ကွန်ပလိန်းတက်လာရင်တာဝန် ယူဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိလေးတွေ တိုးဂိုက်တွေကိုပေးဖို့လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဂိုက်တွေအကြောက်ဆုံးဧည့်သည်ကွန် ပလိန်းမို့ ဒီလိုစည်းကမ်းပိုင်းတွေမှာ တက်လာတဲ့ကွန်ပလိန်းကို ရုံးကကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုရင် ဂိုက်တွေလဲစည်းနဲ့ကမ်းနဲ့လုပ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ညွှန်ကြားချက်နဲ့တကွ ဒီညွှန်ကြားချက် အထူးသဖြင့် စည်းကမ်းပိုင်းတွေမှာတက်လာတဲ့ ကွန်ပလိန်းတွေကို တာဝန်ပါယူပေးမယ်ဆိုရင်ပေ့ါအေ။
တိုးဂိုက်အရမ်းဖြစ်ချင်ခဲ့တာ။ချိပ်ထမီလေးဝတ်ပြီး။ အခုထိ တိုးဂိုက်တွေမြင်ရင် အားကျစိတ်နဲ့ ပြုံးပြခဲ့ဘူးတယ်။ ဆွမ်းဦးပုညရှင်ကိုရောက်တုန်းက အနားမှာစကားပြောနေကြတာ တိုးရစ်တွေအချင်းချင်းလို့ထင်နေခဲ့တာ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မှာ တိုးဂိုက်မြန်မာ။ အေးဆေးပါပဲ အရမ်းလည်းမဖားပါဘူး။ သူပြောသင့်တာတွေရှင်းပြသွားတယ်။ တချို့တွေတော့သိဘူးရယ်။
ပြီးတော့ သိရသလောက် တိုင်းတပါးသားတွေက ပုံမှန်ဆက်ဆံတာကိုပဲကြိုက်ကြတယ်။ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ချင်ကြပေမဲ့ နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီး လိုက်လျောညီထွေနေတတ်ကြတယ်လို့ထင်တယ်။ ဘယ်သူမှားလည်းတော့သိဘူး။ ပွကြီးတော့ ခေါင်းထောင်လာတယ်။သူ့ထမင်းအိုးတုတ်နဲ့ထိုးလို့။ ဟိ။
ထင်မှတ်မထားတဲ့ အချက်က တခြားလူတွေကို ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာ သိတော့လဲ ..ပြင်ရမှာပေါ့ အကြည်ရယ် .တီသဲပြောတာတခြမ်းကတော့ အမှန်ပဲလေ..( မရပ်သင့်တဲ့နေရာရပ်တာ ) .တခြမ်းက သူ့ကားကျပ်လို့ စွာတာ .တိုးကားမရှိတဲ့အရပ်ရော ..ကားကချောင်သလား..ဖြေလိုက်ချမ်းပါ..အဟိဟိ..
ဦးဦးတို့က တိုးမအပ်ခင်ကတဲက ..Do & Don’t ကို မှာထားပြီးသား ။ ဦးဦးရဲ့ ဂိုက်တွေကိုလဲ ခင်ဗျားတို့ ပုခုံးတွေမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ပုံရိပ်ကို ထမ်းထားတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ထားလို့ …မှာထားပြီးသား ။ တိုးကပြန်လာရင်လဲ ..နိုင်ငံခြားသားရဲ့ feedback form တခုထဲမဖတ်ဘူး..ပြသနာတခုခုရှိခဲ့ရင် ဂိုက်ကိုပါခေါ်ကျစ်တာ ။
နာ့မြန်းစွာသဒဲ့။ :harr: နာက ရွာထဲမှာပဲပြောဒါဘာအေ။ သူများတွေလိုဘတ်စ်ကားပေါ်မှာရန်မတွေ့ဘာဘူး။ ပြောရအုံးမယ် ဆြာဆောရိုးရေ
ကားတွေကတော့ ပိတ်ပါတယ်။ မပိတ်ဘူးမပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က တန်းစေ့လမ်းစေ့ ပိတ်တာ။ တန်းစေ့လမ်းစေ့လို့ပြောရတာကတော့ ဘုရင့်နောင်မှာဆို တံတားကြောင့်ပိတ်တယ်။ ဘယ်လိုသွားသွားပိတ်မှာသိသိကြီးနဲ့သွားရတာလေ။ စိတ်တိုစရာမရှိ ဘူးပေါ့အေ။ နောက် အင်းစိန်လှည်းတန်း မြို့ထဲပိတ်တယ်ဆိုတာကလဲ သူ့ Traffic Hour ရှိတယ်လေ။ အဲဒီအချိန် လေးတွေရှောင်သွားရင် မပိတ်ဘူးပေါ့။ နောက် သူတို့ပိတ်တယ်ဆို တာကလဲ မီးပွိုင့်က သူ့အလုပ်သူမှန်မှန်လုပ်သလို သိပ်ပိတ်လာရင် ရဲကိုကိုတို့ကလာရှင်း တယ်လေ။ နောက်နာမည်ကြီးကျောင်းတွေပိတ်တယ်ဆိုတာကလဲကျောင်းဆင်းချိန်နဲ့ ကျောင်းတက်ချိန်လေးပဲ။ အဲအချိန်လေးရှောင်သွားလို့ရတယ်။ အခုဟာကကျတော့ ဘယ်အချိန်တိုးကား လာမယ်မသိဘူးလေနော့။ ရှင်းလောက်တယ်ဆိုသွားလိုက်တာမယ် တဲ့တဲ့တိုးတာပေါ့။ တခါမကဘူး။ မကြာမကြာကြုံတယ်။ တစီးတလေဆိုမသိသာ ဘူးပေါ့ဟာ။ အခုဟာက သုံးစီးဆိုတော့ အတော်ကို မျက်နှာကြီးရာဟင်းဖတ်ပါတယ်သိသာ သွားတာလေ။ အဲဒီနေ့က ဈေးရှေ့မှာ ဧည့်သည်တွေချနေ တော့ ကားတွေဂျမ်းဖြစ်ကုန်လို့ ငါတို့ဖက်ကို တခါလွှတ် ငါးစီးလောက်နဲ့ ဖွင့်ပြီး နောက်တဖက်ကိုကျတော့ အကြာကြီးဖွင့်ထားတာ။ ရဲကိုကိုကလဲ ရှင်းချင်ယောင်ဆောင်နေ တာမြင်နေရတယ်အေ။ ဟိုးဖက်ကိုကျောခိုင်းပြီး တရွှီရွှီမှုတ်နေတာ။ ဘာမှုတ်နေမှန်းမသိဘူး။ ဟိုးကတိုးကားကြီး ကိုလဲမြင်နေရတယ်။ မီးပွိုင့်ထိပ် ကနေ အကုန်မြင်နေရတယ်။ နောက် အဲဒီတိုးကားကြီး ညိမ့်ကနဲနေရာလဲစရွှေ့ရော အဲဒီ ရဲကိုကိုက သူ့တဲထဲပြန်ဝင်သွားပြီး ငါတို့ပွိုင့်ကို တောက်လျှောက်လွှတ်တော့တာ။ အဲဒီခံစားချက်ကဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့အေ လူကြီးလမ်းကြောင်းရှိလို့ တဖက်ကို အသေပိတ်ပြီးတဖက် ကိုအသေဖွင့်ထားတဲ့ခံစားချက်မျိုးဟ။ သူတို့ထိပ်ပိုင်းလုပ်သလို အခုတိုးကားတွေကလဲလုပ်နေတာ သီးခံနေရတယ်။ ဂိုက်တွေနဲ့ ဒရိုင်ဘာတွေကို လမ်းပေါ်မှာ ကားရပ်ပြီး လူမချရဘူးလို့တော့မှာလိုက်ဟန်မရှိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရှေ့ မှာက တခါနှစ်ခါကြုံဖူးတာမှမဟုတ်တာပဲဟာကို။ အခုဟာက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မို့ပြောဖြစ် တာပါလေ။ ပြောချင်နေတာတော့ ကြာတော့ကြာပြီ။ ငါစွာတာမဟုတ်ပါဘူးရပါဘူးဟယ်။ အမြင်မတော်တာလေး တွေဒေါသလေးနဲနဲပါသွား တာပါ။ ပြောရရင်တော့ နောက် ပိုစ့်တပုဒ်ထွက် အုံးမအေ့။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲကဈေးသည်တွေ ရဲ့ ရှက်စရာအဖြစ်တွေကို။
မြန်မာပြည်က လူတွေရဲ့ စရိုက်ကိုက သူများကို အားနာတတ်တယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ သူ့ကျွန်ဘ၀နေလာရတော့ အဖြူမြင်ရင် အထင်ကြီးမိတာ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း ပါကြောင်း ၀န်ခံချင်ပါတယ်။
အဖြူတွေရဲ့ စရိုက်တွေက အထင်ကြီးစရာ ကောင်းတာ အများကြီးရှိတာလည်း အမှန်ပဲ။
သူတို့ အဆင်မပြေရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးပေါ် အထင်သေးမှာ စိုးတာကြောင့် သူတို့ အဆင်ပြေဖို့ အစွမ်းကုန် လိုက်လျော အလျှော့ပေးမိကြတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။
သူဌေးအိမ်လာလည်တာကို ဆင်းရဲသားက ပျာယာခတ်မိသလိုပေါ့။
ဒါပေမယ့် စည်းကမ်းနဲ့ မညီတဲ့ လိုက်လျောမှုတွေ လုပ်မိရင် ပိုအထင်သေးစရာ ဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးတော့ သတိချပ်ကြရမှာပေါ့နော်။
ဟုတ်တယ်အန်တီဒုံရေ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ပါတ်သက်လာရင် ကျွန်မတို့ရှက်စရာတွေက တခုနှစ်ခုမကဘူး။ အခုဟာကလဲ လမ်းစည်းကမ်းကို ကျကျနနချုိးဖောက်တာဟာ ဘတ်စ်ကားတွေမို့ ဆိုထားပါတော့။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံနေတဲ့ တိုးကုန်ပဏီတွေကဖြစ်နေတာ ရင်နာလို့ပါအန်တီဒုံရယ်။
လမ်းစုံက စီဂျေကြီး သဲနု ကွနော်။
အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်က… အဖြူတွေကို.. ဘုရားထူးရတာထက်..
သခင်မျိုးဟေ့ ..ဒို့ Burman
ဒီလူတွေအုပ်ချုပ်နေသမျှတော့ ဒီလိုအပြင်ပိုလာမယ်မထင်ဘူး သဂျီးရေ။ သဂျီးပြန်လာပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ဘာလားဟင်
ခုရက်ပိုင်း မနုအေးတို့မပြုံးတို့ က လက်နက်ကြီးနဲ့သမ နေတာတွေ့ တော့ ကိုယ့်အမတွေ ညီမတွေ မောနေမှာမို့ရေလေးတောင် ခပ်တိုက်ချင်သေးတယ်..။
တိုင်းပြည်ကို ချစ်တာ ဒီလိုလည်း ချစ်တတ်ရမှာဘဲ..။
နိုင်ငံတကာ မူအရတော့ ဧည့်သည်တိုးတွေကလဲ ပိုက်ဆံ အဆင်ပြေလို့ ..စိတ်ဝင်စားလို့လာလည်ရင် အိမ်ရှင်ကလည်း ဧည့်ဝတ်ကျေရမျာပေါ့..။
ရိုင်းရိုင်း ပြောရရင် မျက်နှာလို မျက်နှာရနဲ့ကျွန်စိတ်အခံကို ပြစရာ မလိုပါဘူး..။လာချင်လာ…မလာချင် မလာနဲ့ ..။
လာတဲ့ တိုးတွေထဲမှာ အလွှာစုံပါတယ်.. ။
ဖြူဖြူမြင်တိုင်း သဲသဲလှုပ်နေတာတော့…မလုပ်သင့်ဘူး…ကိုယ့်တာဝန်ကျေချင်တာထက် တစ်ပါးသူတွေထက် အခွင့်ထူးခံ
သူတို့ ကိုယ်တိုင်က ဟာ…ငါတို့ ကို ရေလည် ဂရုစိုက်တာဘဲ ဆိုပြီး မနောခွေ့ နေတာထက်.. စည်းကမ်းပျက်တာကို ပိုကြည့်တတ်တယ်..။
ဒီမိုနိုင်ငံမှာ တစ်တန်းထည်းဘဲ..အိမ်ရှင်မို့တိုးမို့မကွဲပြားပါဘူး..။
ကျနော်တို့နိုင်ငံက တော်တော် များများက အကြောင်းမသိလို့ ပါ…
အဖြူတိုင်း ချမ်းသာတာ မဟုတ်ပါဘူး…ဒါပေမယ့် အာရှကတော့ အဖြူဆို တော်တော် ရူးနေအောင်ကို ပြာကြတာ။။
ချမ်းသာတဲ့ တိုးတွေနည်းနည်းက လွဲရင် တချို့ က သူလိုကိုယ်လိုပါဘဲ..။
မြန်မာမှာက အကြွေးကဒ် နဲ့တိုင်းသူပြည်သားကို ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့နိုင်ငံ မဟုတ်လို့မသိကြပါဘူး..။
ဒီဥရောပမှာတော့ ကင်မရာ( ဓါတ်ပုံ+ ဗွီဒီယို )၊ အိမ်၊ကား..တီဗီ..အကုန် အကြွေးစနစ်နဲ့ ဝယ်ကြတယ်…။
အမြဲတန်း အလုပ်ရှိရင် ကြိုက်တာ အကြွေးဝယ်လို့ ရတယ်..။ အလုပ်သမားတစ်ယောက်က နွေရာသီမှာ ၅ပါတ် ခွင့်ရတယ်..
အဲဒီခွင့်ရက်မှာ တစ်နှစ်လုံး စုငွေကနေ တလစာ လခသဘောမျိုးပေးတယ်…။
အလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့ ငပျင်းတွေကို ဆိုရှယ်က ထောက်ပံ့တယ်။ ဆေးပင်စင်ရသူတွေက လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးရတယ်..။
ရတဲ့ ငွေကြေးက တန်ဘိုးကွာတဲ့ဥရောပက တူရကီတို့အီတလီ ၊ရိုမားနီးယား ၊စပိန် စတဲ့ နိုင်ငံတွေကို သွားလိုက်ကြတာ…
ဒီ့ထက် ဈေးကွာတာက ထိုင်းတို့ မြန်မာတို့ …အဲတော့ လာကြတာပေါ့… မြန်မာနဲ့ ထိုင်းကို..။
ဒီမှာ အထူးကု ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်.. အမှိုက်ကားသိမ်းတဲ့ လူ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်..
ဒါပေမယ့် ဟိုရောက်တဲ့အခါ…အကြွေးဝယ် ကင်မရာကြီးရယ်..ဘိနပ်ကောင်းကောင်းကြီးးရယ်..
ဆံပင် နီဝါ၀ါ…မျက်လုံး ခပ်ပြာပြာတွေ့ တဲ့အခါ….
မြန်မာတစ်ချို့ဖုရားထူး ဖင်ခါကြလေသတည်းပေါ့…။
လာကြည့်စမ်းပါ…အာရှသားတွေ ဒီဘက်ကို …
ဆောရီးဘဲ မင်းနိုင်ငံမှာ မင်း အကောင်ကြီးပြီး အမြှီးရှည်နေပါစေ…ဒီမှာတော့ တူညီသော စည်းကမ်းဘဲ..။
ကျွန်စိတ်ဖျောက်…မျက်လုံးဖွင့်…ဧည့်ဝတ်ကျေပါစေ…ကိုယ့်နိုင်ငံက ဟင်းဖတ်ပါ ဥပဒေကို လူသိအောင် မလုပ်နဲ့…
ကိုယ် ဖုရားထူးချင်ထူး….ကျန်တဲ့လူကို ကျွန်စိတ် မသွင်းနဲ့ ..။
ဒါဗြဲ…. ဟမလေး…းးးး မောထှာ။
ဟုတ်တယ် ဆြာခေါင်ရေ ဟို ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတဲ့သူ သင်္ဘောဆိပ်ကို အိုးစည်ဗုံမောင်းနဲ့ဆင်းကြိုကတဲ က ပြောချင်နေတာ။ သူတို့ကိုက ဖြူဖြူမြင်တိုင်းကိုးကွယ်နေတာ။ အဖြူဆိုအားကြီးအထင်ကြီးပြီး ဘုရားထူး ချင်နေကြတာ။
မိဂီတို့ကတော့ ဂလိုပဲ ဒချိ ဒချိလိုက်တာပဲ.
အဖြူမြင်တိုင်း ဘုရားထူးချင်တဲ့ ရွှေပြည်ကြီးကို…
အသားမဲ ကျောက်စ် အားဂျီး စိတ်နာဒယ်…
ရွာပြန်တိုင်း နိုင်ငံခြားသားဘက် တန်းစီခိုင်းတဲ့…
“ဟယ်လို ဆာ… တိုင်ဆီ” လိုက် မေးတဲ့…
အဲဒါများ ကျွန်မအမျိုးသားလိုလုပ်ပါလား။ ဟိုးအရင် ကြယ်ငါးပွင့်ခေတ်တုန်းက5Gate ကနေ သူတို့က ယူနီဖောင်းတွေနဲ့ ထွက်လာပြီး ဆူးလေကိုဆိုက်ကားငှားတာ။ ဟိုကလဲ နိုင်ငံခြားသားအောက်မေ့လို့ ကမ်းနားလမ်းအတိုင်းနင်း။ ဟိုပါတ်ဒီပါတ်။ မဝေးဝေးအောင်ခေါ်သွားတာ။ သူတို့အုပ်စုကလဲဘာမှမပြောပဲ တယောက်နဲ့တယောက်တောင်စကားမပြောပဲလိုက်လာကြတာ။ ဆူးလေရောက်တော့ ပိုက်ဆံထုပ်ပေးပြီးမှ ဦးလေးကလဲ ဘာလို့ဝေးအောင်လျှောက်နင်းနေတာလဲ နီးနီးလေးဟာကို မောမှာပေါ့လို့ပြောတော့ အစကပြောပါလားဆိုပီး ဆဲလိုက်သမှတဲ့
အရိုးစွဲလာခဲ့တဲ့ အငုံ့စိတ် ကိုဖျောက်ပစ်ရမယ်…လူလူချင်းတန်းတူ
အနော်တို့မှာ ငယ်ကတည်းက အဖြူအစိမ်း ဝတ် ကိုယ့် ဆြာမတွေကို ကြောက်ခဲ့ရတာဆိုတော့
အစိမ်းမြင်လည်း ကြောက်ပြီး ဖားရ နဲ့မို့။
နာ့ မောင်ဖားလေးကို လွမ်းရို့ပါ။
ငါတို့မလဲ ခွင့်လွှတ်ရတာတွေများတော့ တခါတလေပေါက်ကွဲချင်ဒယ်အေ။ ရင်နဲ့မဆံ့လို့ဘာအေ။ ဒါတောင် မီတာခကိုခဏမေ့ထားသေးတယ်အေ။
ဂလောက်ဖစ်လှတာ ..လုပ်မစားတော့ဘူး…တောင်းစားမယ်ဟယ်…. တဌေးကြီး တီသဲ.အန်တီဒုံ နဲ့အရီးခင်…
ခြသေ့်ကျွန်းမှ မမလှလှများ …တိုင်းတပါးရောက် ကိုမင်းသား .. သင်္ဘောကပ်တိန်ကြီး ဘဘဖော …ဦးဦးမိုက် …ဂျာပွန်ပြန် မားကတ်တာ ကိုဂီ …ဟောင်ကောင်တဌေး ကျောက်စ်…..ထမင်းဖိုးလေး တနားပါ…ကိုကြီးတို့မကြီးတို့ ..ထမင်းဖိုးလေးတနာ့ပ…..အဟိဟိ
ရော့ အင့်..၅၀၀ကျပ်..အလက်ဆင်းပြောတဲ့ အဝစား ၅၀၀ဆိုင်မှာသွားစားနော် ဦးဦးပွကြီး။ ဟိ။
အဝစား မှ ငါးရာထဲနော်
ထမင်းချည်းပဲစား ငါးရာ ဆိုတာကို စားခါနီးမှ လာပြောလိမ့်မယ်
တောင်းစားမယ် ဆိုဒေါ့ …
တစ်ပွေတည်းဘဲ တောင်းမှာလားလို့ မေးဂျင်ဘာဒယ် …
အကယ်၍များ .. အဟမ်းး ဟမ်းး
မလေးလို နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေမှာတောင်
သူ့နိုင်ငံသား ဦးစားပေးထားသဗျ …
တစ်ခုခုများ ဖြစ်ပြီဆို သူ့နိုင်ငံသားကို ဘယ်တော့မှ အနာမခံဘူး …
ဒီမှာတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံသားက -င်ခံဘက်က …
ကျုပ် သမတဂျီး ဖစ်မှ ဂလိုဒွေ မဖစ်အောင် လုပ်ပေးမယ် …
ဒါဂျောင့် .. မဲပေးဂျ …
အေးပါအေ ပေးဆိုလဲပေးပါ့မယ်။ ဒါပေမဲ့ နိသမဒဖစ်ရင် နာခရိုလိမ်မော်လုပ်မှာနော်။
ရွာထဲက ကေဇီ့ ထမင်းဆိုင်မှာသွားစားပါလား…
စားဖို့ကတော့ ဆြာဆောရိုးရဘီ ကဲနေဖို့ကကောကွယ်
စားပြီးရင် ကျွဲကောသီး အချိုမတည်းရဘူး… အား ဟိ
ကျောက်စ်ကလဲ ဒေါင်းစိ အဲလေ ဒေါင်းဥဘာဒဲ့ဆို။ ငိငိငိ
ဒီရုပ်ဒီရည်နဲ့ တိတ်ခါ ကျဒယ်။
တရုတ်သူထေးမ အဘွားဂျီးတွေ လာတဲ့ ကလပ်မှာ ဧည့်ခံလုပ်မလားးးး
ဟိုမာ မိုက်မိုက်က မြှောက်ပေးနေသေးးးးးး
ဟိ..ပေါက်ကွဲချင်နေတာ.. ဒီပို့စ်ထဲ ပေါက်ကွဲပါရစေ..ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ဆိုင်တယ်မှတ်…
အဖြူတွေကို ပစားပေးလွန်းလို့ စိတ်တိုရပေါင်းလည်း များပြီ…
ဟိ..ပြောပြန်ရင် ဂိုက်တွေနဲ့ ထသတ်ရမယ်… (ရွာထဲက ဂိုက်များ မဖတ်မိပါစေနှင့်..)
ပြောပါတယ်… မြန်မာတွေက ဧည့်ဝတ်ကျေတာ ဟိုဘက်ကမ်းတောင် လွန်ထွက်နေပါတယ်လို့…
အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားဆိုတာ အဲဒီဧည့်သည်တွေကို ခေါ်တာပဲ…
ဘယ့်နှယ့်. တစ်ချို့ဟိုတယ်တွေ.. ပိုက်ဆံပေးတည်းတာချင်းအတူတူ… local ကျ breakfast က တစ်မျိုး.. ဟို အဖြူကောင်တွေကျ ပုံစံကတစ်မျိုး… ပြာပြာသလဲကို ဖြစ်လို့…
တစ်ချို့ guide တွေလည်း အဲဒီအတိုင်း.. ဧည့်ဝတ်ကျေကြပါ… service အပြည့်ပေးကြပါ… operation ကြီးတစ်ခုလုံး အဆင်ပြေလို့ ခရီးစဉ်ချောမွေ့ရင် tip money ရကြတာ ဂိုက်တွေပါ… ရုံးထဲမှာအစအဆုံး ထိုင်လုပ်နေရတဲ့သူတွေက ဘာ ပိုက်ဆံမှလည်း အပိုမရသလို… အဆင်မသင့်ရင် complaint စာပါ စောင့်နေရတဲ့အဖြစ်ပါ… လုပ်ရကိုင်ရ ခက်နေတဲ့အဖြစ်တွေ သူတို့က မမြင်ဘူးရယ်… ဟိုတယ်တွေနဲ့ သတ်ရပေါင်းလည်းများပြီ…. cancellation fees တွေလည်း အိတ်ထဲက စိုက်လျော်ရတယ်.. ဒီကြားထဲ လေကြောင်းလိုင်းတွေကလည်း ဟိုပြောင်းဒီပြောင်း… ပြီးတော့ ဘာတဲ့.. 72 ခုံလောက်ရှိတဲ့ လေယာဉ်ကို class (၅) လောက်ခွဲပြီး ဈေးက ကစားလိုက်သေးတယ်… သူတို့ပြောင်းတိုင်း လိုက်ပြောင်းရတာ..လူတောင် ငြိမ်ငြိမ်မနေတတ်တော့ဘူး… ဒီလောက် ကျပ်တည်းနေတဲ့ အခြေအနေထဲမှာ.. အမှားလေးများပါခဲ့ရင် guide တွေက နားလည်မှုလေးဘာလေး ပေးကြပါဦး.. ဘယ့်နှယ်.. တစ်ခုခုဆိုတိုင်း ရုံးကို ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး complaint တက်နေ.. ဧည့်သည်ကို ပြောနေတဲ့ မျက်နှာက ပြုံးလို့… ရုံးဝန်ထမ်းဘက် လှည့်လိုက်ရင် ထိုင်တောင် ရှိခိုးပြီး တောင်းပန်ပေးရတော့မယ့် မျက်နှာပေါက်….
ကို Sorrow ကြီး…
တော်ပီ… field change တော့မယ်.. ဒါဗျဲ…
မဟုတ်ရင်လည်း တောင်းစားမယ်… ရွာထဲက သူဌေးများ… ထမင်းဖို့းလေး သနားကြပါ.. ဟီး..
ချိတ်နာနွန်းနို့ဘာအေ။ ပုဂံသွားတုန်းကတောင် ဒေသခံ ဂိုက်ကလေးလေးတွေက နာဒို့ခေါ်ဒါလိုက်ချင် ဘူးတဲ့အေ့။ နိုင်ငံခြားသားမှပိုက်ဆံပိုရလို့လိုက်ချင်တာတဲ့အေ။ မနဲကိုတောင်းပန်ခယပြီး သူတို့လိုချင်တဲ့ ဈေးပေးလို့ နေလည်စာထမင်းပါကျွေးပါမယ်ဆိုတဲ့ကတိက၀တ်တွေနဲ့ ကားပေါ်မနဲခေါ်တင်ခဲ့ ရ တာပါအေ။ ခံစားရချက်ကတော့။
Trader, Park Royal အစရှိတဲ့ ဟောတယ် ရီစက်ရှင်းက သူတွေ ကပါ နိုင်ငံခြားသားများ တစ်ခုခုမေးရင် ပြာနေပြီး ကိုယ်ဒွေဆို အဖက်ကို မလုပ်တာ.. စိတ်နာချက်များ :byee:
ခံစားရဒယ်အေ ခံစားရဒယ်။ ဖော်ရိန်နာ အုံးသီးဆိုတာကလဲချိသေးအေ။ ဟိုနေ့ကတောင် မယ်ဂိတင်ထားသေး သဂေါ။
အမ်တီသဲဃလည်း.. သူကြတော့ ဒေါ်လာ မလိုဂျင်ဒါကြနေဒါဗဲ…
ဒေါ်လာကတော့ ရရင် လူတိုင်းလိုချင်သပေါ့ ကကြောင်ရယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဒေါ်လာရလိုမှု့တခုထဲနဲ့တော့ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုလျစ်လျှူမရှု့သင့်တာလေးပြောချင်တာပါ။ သူများစီးပွားရေးတုတ်နဲ့လဲမထိုးချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေပြင်လိုက်ရင်များပိုကောင်းမလားပေါ့ အဲဒါလေးဘာ။
တနားကြပါ….တနားကြပါ…အဲ့လောက် ပင်ပန်းဆင်းရဲ လုပ်ရကိုင်ရတဲ့ အထဲ …စီဂျေတွေဖွတာကခံရတေး…အဟင့်ဟင့် …တောင်းစားတော့လဲ …ကျွဲကောသီးမကျွေးတဲ့လူကမကျွေး ..ငါးရာပေးတဲ့လူကပေး…ကလပ်မှာ ဘွားကြီးတွေကိုဖျော်ဖြေခိုင်းတဲ့လူက ဖျော်ဖြေခိုင်း….ကားမောင်းခိုင်းတဲ့လူကမောင်းခိုင်း…စိတ်ပေါက်လာရင် ဂေးကလပ်မှာသွားအလုပ်လုပ်ပလိုက်မယ်…ဖြိုးကလေးနဲ့ ….ခုခွိခုခွိ
ဂျာဂျာ ဂေးကလပ်တော့သွားဘာနဲ့အေ နီဂရိုးတွေကလပ်ဆိုဟုတ်သေးအေ။ သွားသွားကားသွားဆေးချည်
ကွန်းမင့်တွေလဲ မိုက်တယ် …
တဦးနဲ့ တဦး ပညာခန်းတွေပြပီး ဖင်ပိတ်ငြင်းတာ မဟုတ်ဘဲ
ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ကို အကြေအလည် ပြောသွားကြတာ
အိုဘဲ့ ရှားပါး … ရှားပါးပို့စ်
ဟီဟိ ကျေးကျေးဘာ ကိုသဗုန်ချင့်
တိုင်တည်ရေးတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုတော့ အစကတွေ့ပေမယ့် အချင်းချင်းအကြောင်းရေးထားတာပဲမှတ်ပြီး ၀င်မဖတ်မိဘူး။
ဖတ်ပြီး ရှေ့ပို့စ်တွေမှာကော၊အခုပို့စ်မှာပါ ဖတ်ကြည့်လာရသမျှ ရွာထဲမှာ အဖြူတွေကိုမျက်စိစပါးမွှေးစူးသူအတော်များတာသိလာရတယ်။
ကိုယ်တိုင်ကတော့ အဖြူဆိုလို့ မြေဖြူခဲနဲ့သာတွေ့နေတာမို့ သူတို့အကြောင်းနားမလည်ပေမယ့်
မဟုတ်ဘူး နန်းတော်ရာသူရေ။ အဖြူတွေကိုမျက်စိစားပင်မွှေးဆူးတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအဖြူတွေကို မျက်နှာ လိုအားရလုပ်ပြီး ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းဂရုမစိုက်တဲ့မြန်မာတွေကို မျက်စိစပင်မွှေးဆူးတာပါ။ အဖြူတွေဆို တာ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ၀င်ငွေတိုးအောင်လုပ်ပေးတာမို့ ကြိုဆိုပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီလာတဲ့အဖြူတွေကို လိုတာထက်ပိုတဲ့ဧည့်ခံနည်းနဲ့ သူတပါးကိုထိခိုက်စေလောက်တဲ့ထိ ဧည့်ဝတ်ကြေတာကိုမကျေနပ်တာပါ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဂျပန်တွေ မြန်မာပြည်ကနေ ခွေးပြေးဝက်ပြေး ပြေးရတုန်းက ဒဏ်ရာပေါင်းစုံနဲ့ သေလုမျောပါး ဖြစ်နေချိန်မှာ ကူညီခဲ့တဲ့ အဲလို စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ မြန်မာတွေ အခုချိန်မှာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ကိုရှာသလို ပြန်ရှာပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တင်ပေးရမလိုဖြစ်နေပြီဗျ။ အဲဒီတုန်းက ဂျပန်တွေ သတ်ပစ်ချင်စရာကောင်းလောက်အောင် ရက်စက်ခဲ့တာတောင်မှ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ မြန်မာပြည်သူအချို့က ရအောင်ကူညီခဲ့ဖူးတယ်။ အခုတော့ဗျာ။ တရုတ်သိုင်းကားထဲကလို ဆွေ 7ဆက် မျိုး 7ဆက် ရန်ငြိုးတွေနဲ့ မပြီးနိုင်တော့ပါလား။ ဝှီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးလေပါတယ်ဗျာ